China Laser ịgbado ọkụ robot Manufacturer na Supplier | Yunhua
Sistemụ ịgbado ọkụ robot laser nwere ogwe aka na-achịkwa, na-ejikwa ọtụtụ axis, yana isi na-egbu laser na-agbanye na ihu ihu nke ogwe aka robot.
Isi isi na-elekwasị anya ngwa ngwa maka ọkụ laser yana usoro njikwa njikwa dị elu. Ihe enyemaka nke nnyefe gas na-ekesa gas, dị ka oxygen ma ọ bụ nitrogen, na isi ịgbado ọkụ. Ọtụtụ usoro na-eji laser generator nke na-enyefe ọkụ laser na isi robot na-egbutu isi site na eriri fiber-optic.
Igwe mgbanaka ịgbado ọkụ laser nwere ike iji ngwa a rụọ ọrụ na ndị nrụpụta ga-ahụ mmugharị dị mma yana welds dị elu.
Yunhua ga - ejikọ ọnụ ahịa kacha mma nke China na ọnụ ahịa ya na mma ya. Ma nwere ike ime ụfọdụ ọpụrụiche pụrụ iche dịka ndị ahịa siri dị. Ndị ahịa nwere ike ịchekwa ihe ruru 50% ma ọ dịkarịa ala ma e jiri ya tụnyere robot ịgbado ọkụ laser a ma ama.
A na-ahaziri usoro ígwè ọrụ ịgbado ọkụ laser ọ bụla maka nkọwa ndị ahịa na mkpa ya.
Ngwunye isi iyi laser
Nkezi ike mmepụta
Ebili Ogologo （nm）
Ọrụ mode Na-aga n'ihu / mgbanwe olu
Maxi mgbanwe olu ugboro （KHz）
Mmepụta ike kwụsie ike
Ngwa anya mma M²
Isi dayameta （μm）
Mmepụta eriri ogologo （m）
380 ± 10% supply nnyefe okpukpu atọ ， 50-60HZ na-agbanwe ugbu a
Ogwe njikwa ike （%）
Ike oriri （W）
450 × 240 × 680 (Nwere aka ahụ)
Q1. Kedu maka ihe achọrọ maka ịgbado ọkụ laser?
A. Maka akụrụngwa, ọ gaghị enwe nnukwu ihe ngosi, nke a ga-ebipụ ike nke isi laser,
Maka njehie dabara adaba, ọ ga-erughị 0.2 ~ 0.5mm, ọ bụrụ na ọdịiche ahụ buru ibu nke ukwuu, ọ gaghị adabara maka ịgbado ọkụ laser,
N'ihi ọkpụrụkpụ nke efere, ejikari ọ bụ ihe na-erughị 5mm
Q2. ihe banyere uru nke laser ịgbado ọkụ robot?
A. e nwere ọtụtụ nke uru maka robot laser ịgbado ọkụ, dị ka ezi ịgbado ọkụ arụmọrụ, ezi ịgbado ọkụ ọsọ, na ala na-eri, wdg
Q3. ọ dị mfe ịmụta robot laser ịgbado ọkụ?
A. tụnyere na robot aak ịgbado ọkụ, o nwere ụfọdụ chọrọ maka ọrụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ soro nkuzi anyị, ọ ga-efu ihe dịka 3 ~ 5 ụbọchị nwere ike ịrụ ọrụ ịgbado ọkụ robot.
Q4. ihe banyere akụkụ ahụ mapụtara maka laser ịgbado ọkụ robot?
A. Isi akụkụ ahụ mapụtara bụ iko maka ịgbado ọkụ laser
Q5. Enwere m ike iji ya maka ịgbado ọkụ nnukwu ọkpụrụkpụ?
A. Site na tiori, enwere ike iji ya, mana ugwo ga adi elu, ma o nweghi aro.
Nke gara aga: Mig ịgbado ọkụ Robot
Osote: 8 Axis Robotic Welding Workstation na Ọnọdụ abụọ